Ibsaa Jireenyaa - Page 15 of 24 - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
Ilmi namaa jiruu fi jireenya isaa keessatti rakkoo adda addaa waliin wal’aanso baha. Takkaa rakkoon tuni isa kuffisti takkaa immoo isatu rakkoo tana kuffisa. Haalli fi dandeettin namoota gargar waan ta’eef dandeettin rakkoo irraa dandamachu garagara. Namoonni gariin yommuu rakkoon xiqqoon isaan tuqxu kan garmalee iyyanii fi obsa hin qabnetu jiru. Faallaa kanaa immoo namoonni gariin rakkoon gurguddoon yommuu itti roobu obsa ajaa’ibsiisa kan qabanii fi cal’isantu jiru. Namoonni jalqabaa rakkoon yommuu isaan tuqxu nama kanattis, kaanittis ni himatu garuu furmaata quubsa hin argatan. Inuma rakkoo irratti obsa dhabanii yommuu iyyan, rakkoon isaani itti abaasa. Read more
Torbaan darbee waa’ee niyyaa tuttuquuf yaalle turre. Yaadachisaf, hojiin kamiyyuu niyyaa irratti kan ijaarrameedha. Sababa namoonni niyyaa garagaraa qabaniif milkaa’inni fi gammachuun isaani garagara. Hojiima walfakkaatu osoo hojjatun niyyaan isaanii garagara waan ta’eef milkaa’inni fi bu’aan isaan buusan akka ardii fi samii addaan fagaata. Iccitiin kanaa niyyaa ofii qulqulleessu fi qulqulleessu dhiisu irratti hundaa’a. Nama waggaa kudhaan keessatti garmalee osoo hojjatu bu’aa gaarii hin buusne fi nama waggaa shan ykn sanii gadi keessatti bu’aa hangana hin jedhamne yommuu buusu yeroo argite si hin dinqisiisin. Read more
Torbaan darbee shakkii bakka lamatti erga qoonne booda shakkii gosa tokkoffaa ilaalle turre. Har’a In sha Allaah shakkii gosa lamattaa ilaalla. Innis shakkii namoota jiddu, shakkii dhiirsa fi niiti jiddutti uumamu. Shakkiin namoota jiddutti uumamu yoo daangaa hin qabaatin miidhaa guddaa fidu danda’a. Akkuma torbaan darbee kaasne shakkiin dhibee qalbii waan ta’eef sababa fi dawaa qaba. Namtichi sababaa fi dawaa beeke dhibee kana wal’aanu qaba. Read more
Wanta jibbituu fi badaa sadaqaa hin kenniin. Osoo wanti sun siif kenname, ijaan duununfatte malee hin fudhattu. Wanta gaarii Rabbiin irraa eegaa akkamitti wanta jibbituu fi badaa sadaqaa kennitaa? Namoonni gariin midhaan irraa yommuu sadaqaa kennaan, kan gatiin isaa gadii bu’aa fi qulqullinna hin qabne namaa kennu. Rabbiin waan gaarii akka sadaqaa kenninu itti nu ajaja. Read more